တစ်နှစ်ပြည့် ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း ထွက်မည် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
တစ်နှစ်ပြည့် ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း ထွက်မည်	Posted by mm thinker on January 23, 2009
Posted in: Announcement.	Tagged: Announcement.	Leaveacomment
ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်း Vol.1, Issue.6 ထွက်ပါမည်။ ဖွဲ့တည်ရာ တစ်နှစ်ပြည့်လုနီး အချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ မဂ္ဂဇင်း မထွက်နိုင်သေးသည့် ကာလတွင် မြန်မာဘလော့ဂ်ပရက်စ်၏ အကောင်းဆုံးစာပေဆုတွင်လည်း မဲ အဆုံးအဖြတ်ဖြင့် တစ်နှစ်တာ အတွက် အကောင်းဆုံးဆု ရခဲ့ပါသည်။
ယခင် ဘလော့ဂ်တွင် အယ်ရာတက်၍ ပို့စ်တင်မရဖြစ်နေသဖြင့် နှစ်သစ်နုတ်ခွန်းဆက်လွှာကိုပင် မတင်နိုင်ခဲ့ပါ။ ယခု ဒိုမိန်းနှင့် ဆာဗာကို ဆုအဖြစ်လက်ခံရရှိ၍ ပြုပြင် ပြောင်းရွှေ့နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
မကြာမီ ဖောင်ပိတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
← My Thought on Gauk Gyet	လောကအလှ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဖွဲ့တည်ရာတို့ အင်တာဗျူး →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...